Yan Aung: စစ်ကိုင်း ပညာဒါနသင်တန်းများအတွက် အလှူငွေ စာရင်း (Updates)
စစ်ကိုင်း ပညာဒါနသင်တန်းများအတွက် အလှူငွေ စာရင်း (Updates)
09-211-0202 နံပါတ်နဲ့ ဦးဇင်း ဦးကောဝိဒကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်လို့ရပါပြီ။
ဒီစာရင်းက ဇူလိုင် (၆) ရက်နေ့အထိ ဦးဇင်းဆီက လက်ခံရရှိသမျှပါ. စာရင်း အပြည့်အစုံကိုတော့ မ၀ါဝါခိုင်မင်းဘလော့ဂ်မှာ ဒီလိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်.
(၁) ဦးမင်းဟန်+ ဒေါ်ပိုပိုအောင်. သားမောင်မင်းခန့် မိသားစုကောင်းမှု…. USD 100
(၂) မမီးငယ်နှင့်မိသားစုကောင်းမှု ... USD 50
(၃) ဘလော့ဂါရန်အောင်နှင့် မိသားစုကောင်းမှု ... မြန်မာငွေ ကျပ်တစ်သိန်း
တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်. ကျွန်တော့်အိမ်ကို ဦးကောဝိဒဆီ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး ငွေလွှဲဖို့ကိစ္စ စီစဉ်ပေးဖို့ ပြောခိုင်းထားပါတယ်. ဒီနေ့ (သို့) မနက်ဖြန် နောက်ဆုံးထားပြီး လွှဲပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်. ဦးဇင်းဖက်က အလှူငွေရပြီးရင်လည်း ပို့စ်မှာ update တင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ဒီအလှူငွေကောက်ခံရေး ကိစ္စကို အားတက်သရော ဆောင်ရွက်ကြိုးပမ်းသွားကြတဲ့ မ၀ါဝါခိုင်မင်း၊ ကိုဂျေဂျူဝိုင်၊ ရွာသားလေး YTU အစရှိသူတို့ အပြင် တစ်ခြားကူညီပံ့ပိုးပေးသူများ၊ အဆက်အသွယ်များကို ကြိုးစားရှာဖွေပေးသူများနှင့် အလှူရှင်များအားလုံးကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးအထူးပဲ တင်ရှိမိပါတယ်ခင်ဗျာ...
ဒီအလှူငွေကိစ္စက တကယ်တော့ ဦးဇင်းရဲ့ ဇူလိုင် (၉) ရက်မွေးနေ့ပွဲအမှီ လှူဒါန်းချင်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘလော့ဂါညီအစ်ကို မောင်နှမတွေ ကြိုးစားခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်. ဒီမွေးနေ့ပွဲပြီးတာနဲ့ အရာရာအားလုံးဟာ ပြီးပြည့်စုံသွားမယ်လို့ မမှတ်ယူစေချင်ပါ. ပုံမှန်စောင့်ကြည့် ဆက်သွယ်ပြီး လိုအပ်သမျှကို ဖြည့်ဆည်းပေးသွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ ရည်မှန်းထားပါတယ်.
ဒီတစ်ခေါက် မမှီလိုက်လို့ နောက်တစ်ခေါက်ကျမှ သီးသီးသန့်သန့် လှူဒါန်းချင်သူများအတွက်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက်စီစဉ်ပေးသွားပါမယ်.
ဆိုလိုတာက တစ်ချို့က ပစ္စည်းတစ်ခုကို သီးသန့် မိမိတို့ နာမည်ထိုးပြီး လှူဒါန်းချင်တာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်. အဲဒါမျိုးကို အဆင်ပြေအောင် ကျွန်တော်တို့ ဦးဇင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီး update မှန်မှန်ပေးသွားပါမယ်. ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လှူဒါန်းနိုင်သလို ဦးဇင်းရဲ့ ဖုန်းကို တိုက်ရိုက်ဆက်ပြီးတော့လည်း ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်.
ဒါကြောင့် ရှေ့လျှောက် မိမိတို့ကိုယ်တိုင်သော်ဖြစ်စေ၊ စိတ်ဝင်စားသူ စေတနာရှင်များကို ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်ပေးသွားဖို့ တပါတည်း မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျား....
ဆရာတော်ရဲ့ အလှူရှင်စာရင်းမှာ မီးမီးနာမည်လည်း
မောင်ရန်အောင်တစ်ယောက် လိုရာဆန္ဒတွေ တလုံးတ၀
ရှယ်လီနှင့် ရင်ခုန်ခဲ့သော တစ်ညတာ...
စက်ဘီးစီးခြင်း အက်ဆေး (၄)
အလှုငွေ စာရင်းရှင်းတမ်း (၁)
၀ိဇာတ အလှူတော်မင်္ဂလာ ဖိတ်ကြားလွှာ...
စက်ဘီးစီးခြင်း အက်ဆေး (၃)
စစ်ကိုင်း ပညာဒါနသင်တန်းများအတွက် အလှူငွေ စာရင်း (Up...
စက်ဘီးစီးခြင်း အက်ဆေး (၂)